Haitrano goavana tao Salazamay : magazay lehibe fitehirizana jirofo kilan’ny afo | NewsMada
Haitrano goavana tao Salazamay : magazay lehibe fitehirizana jirofo kilan’ny afo
Magazay fitehirizana jirofo nirehitra tany Toamasina. Nahery vaika ny afo ary naharitra vao maty. Nanahy zavatra hafa ny olona, raha voalaza fa mety fipoahana herinaratra ny nahatonga izany.
Nitrangana firehetana mahery vaika tany Salazamay Toamasina, omaly, tokony ho tamin’ny 4 ora maraina. Voalaza fa magazay fitehirizana jirofo ity nirehitra ity, ary sahirana mihitsy ny mpamonjy voina tamin’ny famonoana afo. Fantatra fa nisy lasantsin-jirofo 80 barika tao anatiny, ka ireo no tena nahina ho nipoaka. Tonga teny an-toerana ny mpamonjy voina nampian’ny avy any Ambatovy sy Asecna namono ny afo. “Nahery vaika ny afo ka natahorana ny nitarany tamin’ireo Tanana manodidina”, hoy ny fanazavana. Raha ny vaovao avy any an-toerana ihany, efa tamin’ny 8 ora maraina vao maty ny afo, raha tamin’ny 4 ora maraina ny niatombohany.
Hatramin’izao aloha, ahiana ho vokatry ny fipoahana herinaratra ny nahatonga ny loza. Tonga teny an-toerana ny mpitandro filaminana nanao ny fandihadiana rehetra momba ity loza ity. Ankoatra ny jirofo, fantatra fa nisy kafe sy lavanila ihany koa tao an-toerana. Misy ny miahiahy fa haintrano niniana natao ity nitranga ity. Ny mpitandro filaminana ihany anefa no afaka mamaritra ny fahamarinan’izany.
Miverimberina ny afo
Raha ny zava-misy aloha, miverimberina ny haintrano any Toamasina any. Efa nisy naharavana faritrakely iray mihitsy tsy lavitra an’i Tanambao V, ny taona 2016. Olana anefa ny eo amin’ny fitaovana famonoana afo, izay itovizan’ny faritra rehetra. Ny tao Toamasina Renivohitra aza efa nahazo fanampiana avy amin’ny orinasa Ambatovy amin’ny asa famonoana afo. Raha ny omaly aloha, nilamina ny momba iny firehetana iny, fa anisan’ny andrasana amin’ny manam-pahefana ihany koa ny ady amin’ny haintrano amin’ny faritra maro eto amintsika, na eto an-dRenivohitra aza. Loza mitatao hatrany io, indrindra amin’ireo faritra iva. Rehefa tsy tondradrano, dia haintrano.